ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा, २२ हजार रोपनी जग्गा लथालिंग ! - ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा, २२ हजार रोपनी जग्गा लथालिंग !
ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा, २२ हजार रोपनी जग्गा लथालिंग !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २५ असार, 05:10:42 AM
काठमाडौं । दुई महिनाअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ताहाचलस्थित छाउनी मार्गमा रहेको १५ रोपनी जग्गा खाली गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालाई पत्राचार गर्‍यो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ट्रस्टको नाम रहेको ‘विजयाघर’ सहितको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि प्रेरणाले फैसला स्वीकार गरेकी छैनन् । उनले घरजग्गा बुबाले दाइजो दिएको भन्दै छाड्न अटेरी गर्दै आएकी छन् ।
अदालतले २०७३ पुस २९ गते राजसंस्थाको सम्पत्ति राष्ट्र हितविपरीत व्यक्तिगत रूपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा दिन वा कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने फैसला गरेको थियो ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्ति कसैका नाममा दाइजो दिन नपाइने भन्दै त्यस्ता जग्गा ट्रस्टका नाममा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त विजयाघर स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले उपयोग गर्दै आएका थिए ।
छाउनी मार्गमै ट्रस्टको नाममा रहेको २ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा जुनी थापाले लामो समयदेखि भोग गर्दै आएकी छन् । ट्रस्टले खाली गर्न ३ पटक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई उनले बेवास्ता गर्दै आइन् ।
खाली गर्न ३० दिने, ३५ दिने र ७ दिने सूचना जारी गरे पनि थापाले टेरिनन् । उक्त जग्गामा केही दिनअघि कार्यालयले ताल्चा लगाएको छ । तर, उनले सहज रूपमा जग्गा खाली गर्न मानेकी छैनन् ।
ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा पनि विवादमा छ । राज्यलाई ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने गरी निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राज्यकोषलाई ठूलो घाटा हुने गरी रकम घोटाला भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।
ट्रस्ट आफैंले गरेको निर्णय लत्याउँंदै एक फर्मले निर्धारण गरेको भाडा दर स्वीकृत गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको मूल्यांकनविपरीत थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिकै प्रस्तावका भरमा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ६८ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरिएको थियो ।
थामसेर्कुले बोलपत्रमा लेखिएभन्दा कम मूल्य भाडामा संरचना निर्माण गरिराखेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मूल्यांकन समितिले २०७३ असोज १९ मा निर्माण र लिज भाडामा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । थामसेर्कु आफैंले पहिले प्रस्ताव गरी ल्याएको ५ अर्बभन्दा कम सम्झौतापत्रमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ ।
स्थानीयको अवरोध, सरकारको उदासीनता, कर्मचारी तथा बिचौलियाबीचको मिलेमतोले गर्दा ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको २१ हजार ५ सय ५२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लथालिंग अवस्थामा छ । सरकारले पूर्वराजपरिवारले भोग गर्दै आएको र सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास गरी ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याए पनि त्यसको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन ।
मुलुकभर रहेका यस्ता जग्गाको खोजतलास अघि बढाइएको भए पनि यी जग्गाको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने ठोस निर्णय हुन नसकेको ट्रस्टकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रशस्त अचल सम्पत्ति छ, सदुपयोग हुन सकेन, जसले सक्यो उसैले उपभोग गर्न थालेका छन् । लिजमा दिएको रकम पनि थोरै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो त राज्यको ठूलो आम्दानीको स्रोत हो, तर उचित व्यवस्थापन हुन सकेन, खालि चलखेलमात्र बढी भयो ।’
राजधानी तथा मुलुकका अन्य सहरमा रहेको जग्गा भाडा लगाए पनि उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन । जस्तै, गोकर्णस्थित ‘गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट’ को ३ हजार ९ सय ७१ रोपनीभन्दा बढी जग्गा एलएम सुविर ब्रदर्स ९नेपाल० प्रालि तथा यती होल्डिङ्स प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ ।
झन्डै ४ हजार रोपनी जग्गालाई वार्षिक दुई करोड रुपैयाँमा भाडामा लगाइएको छ । सिंहदरबारबाट झन्डै १३ किमिमात्र टाढा रहेको भौतिक संरचनासहितको हरियालीयुक्त जंगल ३० वर्षका लागि निकै कम मूल्यमा लिजमा दिइएको छ ।
कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा रहेको करिब ५ रोपनी जग्गा ‘कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालि’ लाई दिइएको छ । २०५० असारमा भाडामा दिइएको उक्त जग्गाको लिज म्याद २०७७ असारमा सकिँदै छ । कन्सेप्टले ‘काठमाडौं प्लाजा’ नामक विशाल भवन निर्माण गरेर भाडा उठाउने गरेको छ । तर, ट्रस्टलाई वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउँछ ।
लाजिम्पाटस्थित ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई १५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । बैंकले वार्षिक १ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्छ । यसरी निकै सस्तो लिजमा लगाएको अर्को जग्गा हो, टेकुस्थित बिजनेस पार्क । टाउन डेभलपर्स प्रालिलाई ३० वर्षका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी लिजमा लगाइएको छ ।
१९ रोपनी १२ आना जग्गालाई २०८३ चैतसम्म लिज लगाइएको छ । ‘सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स’ कालीमाटीलाई ५ रोपनी ६ आना जग्गा ट्रस्टले वार्षिक १५ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ आउने गरी भाडामा लगाएको छ । कमलादीस्थित संरचनासहितको १२ आना जग्गाको मासिक भाडा ५५ हजार रुपैयाँ छ । उक्त जग्गा ट्रस्टले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई भाडामा दिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने काम भइरहेको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव डा। रमेशप्रसाद सिंहले बताए । ‘खोज्ने र व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ, लिज सम्बन्धमा पनि मूल्यांकन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अब व्यवस्थित तरिकाले सम्पत्तिको जगेर्ना गरिन्छ, जुनी थापाकोमा ताल्चा लगाएका छौं, अब हाम्रो नियन्त्रणमा आइसक्यो ।’ ट्रस्टसँग ८७ अर्ब रुपैयाँको चल–अचल सम्पत्ति रहेको उनले बताए ।
२०७५, २५ असार, 05:10:42 AM